Cudurka Coronavirus: Tallaalka Covid-19 ee Ruushka oo “waxtar yeeshay” | Gaaroodi News
Tallaal ay sameysay dowladda Ruushka ayaa yeeshay “waxtar uu ku xoojinayo hannaanka difaaca jirka, sida warbixin lagu xusay.
Seynisyahannada dalka Ruushka ayaa markii ugu horeysay daabacay warbixin ku saabsan tallaalka cudurka covid-19, waxayna sheegeen in tijaaba horudhac ah ay muujineysa falcelin difaaca jirka oo ka dhigan in uu waxtar leeyahay.
Tallaalka waxaa weli u dhiman in la mariyo tijaabo ay kumannaan qof ka qeybgalayaan.
Sida ay sheegtay hey’adda caafimmaadka adduunka ee WHO, waxaa hadda la wadaa 176 tallaal oo tijaaba ah, kuwaas oo guud ahaan dedaaladooda ay ka socdaan caalamka. Sadeex ka mid ah tallaalka ayaa haatan la sheegay in heer wanaagsan ay marayaan